दिदी रुद्रमाया मगरको उद्धार !
सोमबार १५ मंसिर, २०७७ (Monday November 30, 2020)
राजा आऊ, देश बचाऊ भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्षको चुनाव हुँदै
कैलाश एयरको हेलिकप्टर नुवाकोटमा आकस्मिक अवतरण
चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे काठमाडौं आइपुगे
वडाध्यक्षसहित ५ जनाविरुद्ध कीर्ते नागरिकता दिलाएको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी
बिहीबार २२ श्रावण, २०७७ Devshankar Poudel 4398
एकरात देउरालीको लाम्टेमा पद्यबहादुर बस्नेतजीका घरमा पूर्वसांसद कमलप्रकाश सुनुवार, जगन्नाथ दाहाल (जे.एन.), सुवास लामा, यामबहादुर महतका साथ बास बसेर विहान साँघुटार बजार तिर जाने सुरसार गर्दै थियौं । यामबहादुर महतजीले भन्नु’भो– “यहाँ माथी एउटा जीउँदो देवी हुनुहुन्छ । उहाँको दर्शन गरौं, अनि जाउँ ! मेरो पछिपछि आउनुस् त!!” जीवित देवी देउता पनि कहिं हुन्छ, के उट्पट्याङ कुरा गर्नु’भो यामजीले भन्ने ठान्दै केहिनकेहि त होला भनेर हामी पछिपछि उकालो लाग्यौं । कहिं बाटो छ, कहिं छैन । कान्ला र झाडी भएर एउटा अक्करको टाकुरामा पुर्याउनु भयो । त्यहाँ मुस्किलले एउटा पलङ अटाउन सकिने सानो बुकुरो थियो । त्यहाँ साठी बर्षजति उमेरकी एकजना महिला हुनुहुँदो रहेछ । उहाँ नै रहेछ सजीव देवी ! उहाँका हातका हर्थुङ्गा मात्र छन्, औंला छैनन् । खुट्टा कुर्कुच्चासम्म ठूटा छन् । दुवै आँखा बन्द छन्, देख्दैनन् । मानिलिउँ स्वस्थानी ब्रत कथामा बर्णन गरिएकी लावन्य देशकी महारानी “चन्द्रववति” को सजीव अवतार जस्तो ।
त्यहिं कुटीको छेउमा सानो खाल्टो खनिएको रहेछ । त्यहिं खाल्टो चर्पीको रुपमा प्रयोग भएको छ । चर्पी प्रयोग पछि सूची गर्ने हात छैन । कस्तो नारकीय जीवन । ढोका छेउ खुल्ला चर्पी, वातावरण दुर्गन्धित र प्रदुषित छ । त्यहाँबाट लड्यो भने छङ्गाछूर भीर । यस्तो दुर्दशाको बसाई हामीले पहिलो पटक देख्यौं । हामी गाउँगाउँमा रग्रगी हिंड्थ्यौं । यस्तो हालत त्यस अघि कसैले पनि सुनाएन÷देखाएन । दिदीका आँखा यसो च्यातेर हेर्यौं । उपचार लाग्छ कि जस्तो लाग्यो । उहाँ छक्क पर्नु’भो । आजसम्म कुष्टरोगी भनेर उहाँको शरीर बाहिरी मानिस कसैले छोएको रहेनछ । उहाँलाई नौ–दश बर्षको उमेरदेखि कुष्टरोगले सताएको रहेछ । त्यसवेला मसंग एउटा स्टिल क्यामेरा थियो । उहाँको एउटा तस्विर लिएँ । उहाँका जीवनका दुःखका अनुभूतिका कथाहरू केहिबेर सुन्यौं । उहाँको आफन्त कोहि रहेन छ । कसैले ल्याइदियो भने, खायो । नल्याइदिए भोकै तिर्खै बस्यो । यस्तो रहेछ हालत । उहाँका माइला बाका पनाती (ताति नाता पर्ने) गोपालजीकी छोरीले दिनको एक छाक खाना ल्याईदिंदी रहिछिन् । दिदीलाई कसैैले नछुने गरे पनि गोपालकी छोरी चाहिं कहिले काहिं नुहाइदिने र कपाल कोरिदिने समेत गर्दिरहिछिन् । अनि कोहि कोही मनकारीहरू विशेष गरि रातमाटा वीरबहादुर कार्कीको परिवार र लाम्टेका बस्नेत परिवार आदिले चाडवाड र अरु खासखास बेलामा खाना ल्याईदिंदा रहेछन् । यस्तै यस्तै दिदीले जीवनका कष्टकर कुरा सुनाउनु’भो । त्यति उकालो हिंडाएर त्यहाँसम्म पुर्याएर दिदी रुद्रमाया मगर (ठूलीकान्छी) को त्यो हातल देखाउनु भएकोमा यामबहादुर महतजीलाई धन्यवाद दियौं र काभ्रे, कात्तिके, लक्ष्मीबास, थाक्ले भएर साँघुटार पुग्यौं । त्यसको केहिदिन पछि मन्थली फर्कियौं । सवै आआफ्नो काममा लाग्यौं । तर यो दिदीलाई दुर्दशाबाट कसरी मुक्ति दिलाउने भनेर सवैजना चिन्तित रह्यौं । भतिज मात्रिका पौडेल राजधानी दैनिकमा काम गर्थे । एक सन्दर्भमा मन्थलीमा भेट हुँदा उक्त दुःखीनी दिदीको अवस्था बताएँ र तस्विर दिएँ । राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा दिदी रुद्रमाया मगरको तस्विर सहित खवर छापियो । त्यस पछि कान्तिपुर लगायत अन्य पत्रिकाहरूले पनि खवर छापे । विभिन्न संस्थाहरूले दिदीलाई संरक्षण दिने इच्छा जाहेर गरे । मात्रिकाजी मार्फत त्यसको सम्पर्क ब्यक्ति मनै भएँ । काठमाण्डूमा क. कमलप्रकाश सुनुवार र सुवास लामाहरू लागीरहनु भएको थियो । एक दिन कमलजीले फोन गर्नुभयो । उहाँले न्यू सेडल भन्ने संस्थासंग संम्पर्क गर्नु भएको रहेछ । “यो संस्था राम्रो छ” भनेर सिफारिस गर्नु’भो । जे.एन. दाहालजी र मैले त्यहिं पठाउने निश्चय गर्यौं । म अक्सर मन्थलीमा बस्थें । देउरालीबाट दिदीलाई झिकायौं । त्यसमा जगन्नाथ दाहालजीको मद्दत रह्यो । गाउँका छरछिमेकीले कापेशमा राखेर दिदीलाई मन्थलीमा ल्याइदिनु भो । त्यसवेला मन्थली बजारका होटलमा महारोग लागेकी मान्छे भनेर दिदीलाई बस्ने अनुकुलता मिलेन छ । जे.एन.जीले भञ्ज्याङ्गबाट आकाशेमा फोन गर्नुभयो । त्यसवेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को पार्टी कार्यालय आकाशेमा थियो । म पनि आकाशेमै थिएँ । उहाँलाई कार्यालयमा पठाउन भनें । पार्टी कार्यालयमै दुइटा बेञ्च जोडेर पलङ्ग बनाइदिएँ । गोपालजी र दिदीलाई त्यहिं बस्ने ब्यबस्था मिलाएँ । कपडा पार्टी कार्यालयमा थियो । सवै राम्रो प्रवन्ध गरें । नजिकै टेकनपुर निवासी सीतादेवी कार्की दिदी बस्नु हुन्थ्यो । दिदीले बसुञ्जेल खानाको ब्यवस्था गरिदिनु भयो । केहि मनकारी मित्रहरूबाट पैसा उठाएर प्लेनको टिकट काटेका थियौं । तेस्रो दिन प्लेन आयो । मन्थलीबाट दिदी रुद्रमाया मगरको साथमा नजिकको भदाहा गोपाल पुलामी समेतलाई हवाई जहाज मार्फत काठमाण्डू पठायौं । त्रिभुवन विमानस्थल गौचरणमा कमलप्रकाश सुनुवारले उहाँहरूको स्वागत गर्नु’भो ।
त्यस दिनदेखि न्यू सेडलले अभिभावकत्व ग्रहण गर्यो । आँखाको उपचार हुन नसके पनि दिदीको जीवन फेरीयो । अरु घाउहरू र पुरानो रोगबाट दिदी मुक्त हुनुभयो । यो सव अवसर प्रदान गर्ने यामबहादुर महत, कमलप्रकाश सुनुवार, जे.एन. दाहाल, सुवास लामा, मात्रिका पौडेल लगायत धन्यवाको पात्र हुनुहुन्छ । हाम्रो समस्यालाई बुझिदिएर राम्रो अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुने चित्रबहादुर केसी, प्रकाश सुनुवार लगायत न्यू सेडललाई हामी विर्सन सक्दैनौं । उहाँहरू सवैलाई फेरी पनि धन्यवाद छ!! दिदीले नारकीय जीवनबाट मुक्ति पाएको अठार बर्ष पछि रमेश रोका, श्रीहरि श्रेष्ठ, किरण मोक्तान, श्यामसुन्दर कार्की र सुमन कार्कीका साथ दिदी भेट्न “न्यू सेडल” कपनमा पुग्ने अवसर जुटेको थियो ।
रामेछाप नगरपालिका २,देउराली घर भएकी शारीरिक अपांग रुद्रमाया मगरलाई पुर्ब माननीय कमल प्रकाश सुनुवार र देब शंकर पौडेलको पहलमा उद्दार गरि कपन स्थित न्यु सेडल संस्थामा २०५९ मा ल्याईदिनुभएको र आज उहाँ रुद्रमाया मगरलाई भेट्न देब शंकर पौडेल ,रमेश रोका ,श्री हरि श्रेष्ठ ,किरण मोक्तान ,श्यामसुन्दर कार्की ,सुमन कार्की
Posted by Filmshalatv on Tuesday, August 4, 2020
???? ????????? ????? ?????? ! aorkonoe orkonoe http://www.gj7e788zj94q7t2c9ctcfyu739i9279js.org/ [url=http://www.gj7e788zj94q7t2c9ctcfyu739i9279js.org/]uorkonoe[/url]
Hearts Pattern High Top Sneakers Moda Lace Up Canvas Scarpe Casual Scuola Walking Scarpa per Uomini Ragazzi Ragazzi Monkey Combat - Bolso organizador Herren Serrano Onitsuka Tiger Schuhe. 39.5 EU. Black/White Tamaris 1-1-25377-25. Bottine Femme Guizhou University of Traditional Chinese Medicine
MARA Sandalen (42 EU. Splash Grey)
Camlock E adidas Originals NMD_R1 Womens Running Shoes (UK 6.5) 1-1-22407-23. Zapatos con Plataforma para Mujer Scarpe Da Calcio PU Leather Youth Professional Race Short Nails Fashion Sneakers Set Da3Pezzi.Red.41.5 Jean claude etuiacigarettes chrome 20/ornements MARA Sandalen (42 EU. Splash Grey)
anti bacteria hospital curtain
Hard Pad Price
Electronic Soft Label Price
China Balcony Railing Design
China Honda Wiper Blades
Honda Wiper Blades Supplier
Casual Shoes Outsole Supplier
China Kn95 Civil
Kn95 Civil Supplier
भारतमा बेचिएका चेलीलाई उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाइयो
बेचिन लागेका १३ नेपाली चेलीलाई भारतबाट उद्धार
बली दिन भारततर्फ लैजाँदै गरिएका दुई किशोरीको सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीद्धारा उद्धार
सुधारगृहमा छापा, ५२ जना महिलाको उद्धार